ऋणबाट मुक्ति पाउन राशीअनुसार कसले के गर्ने ? - Sabal Post
ऋणबाट मुक्ति पाउन राशीअनुसार कसले के गर्ने ?
ऋण यस्तो बोझ हो, जसले थिचेपछि मानिसको जीवन सहज हुदैन । यसले मानिसको एक लयमा चलिरहेको जीवनलाई बिर्गान सक्छ । त्यसैले मानिसहरु सकेसम्म ऋण लिन चाहादैनन् । कतिपयले तिर्न नसक्ने भएपछि वा ऋणदाताको दबाबले आत्महत्यासम्म गर्दछन् । ज्योतिषशास्त्र केहि यस्ता उपायहरु छन्, जसले ऋणबाट छुटकारा पाउने भन्ने मार्ग प्रसस्त गर्दछ । यस्तो छ ऋणबाट मुक्ति पाउन राशी अनुसार अपनाउनु पर्ने उपायहरु स् मेष राशी यस राशीका जातकले ऋणबाट मुक्ति पाउन भगवान गणेशको नित्य फूल अर्पण गरेर आराधना गर्नुपर्दछ ।
वृष राशी-ऋणबाट मुक्ति पाउन यस राशीका जातकले नित्य रातो फूल अर्पण गरेर माता लक्ष्मीको आराधना गर्नुपर्दछ । मिथुन राशी –यस राशीका जातकले ऋणबाट मुक्ति पाउन नित्य बिहान बेलुका हनुमान चालीसा पाठ गरेर हनुमानजीको आराधना गर्नुपर्दछ । कर्कट राशी- ऋणबाट मुक्ति पाउन यस राशीका जातकले बिहिबारका दिन केराको बोटको पूजा गर्नुपर्दछ ।
सिंह राशी-यस राशीका जातकले ऋणबाट मुक्ति पाउन शनिवारको दिन पारेर पीपलको रुख मुनि दियो बाल्नु पर्दछ । कन्या राशी-ऋणबाट मुक्ति पाउन वा धन प्राप्तिकालागी यस राशीका जातकले भगवान शिवलाई नित्य जल अर्पण गर्नुपर्दछ ।तुला राशी-यस राशीका जातकले ऋणबाट मुक्ति पाउन बिहीबारका दिन भगवान श्रीविष्णुको सहस्त्रनाम पाठ गरी दिनभर पहेलो वस्त्र धारण गर्नुपर्दछ । वृश्चिक राशी-ऋणबाट मुक्ति पाउन वा धन प्राप्तिकालागी यस राशीका जातकले मंगलवारका दिन तुलसी दल अर्पित गर्नुपर्दछ । धनु राशी-यस राशीका जातकले ऋणबाट मुक्ति पाउन नित्य बिहान भगवान श्रीविष्णु र माता लक्ष्मीको पूजा गर्नुपर्दछ ।
मकर राशी- ऋणबाट मुक्ति पाउन मकर राशीका जातकले नित्य बिहान गणेशजीको आराधना गर्नुपर्दछ । बुधवारका दिन पारेर हरीयो अलाइची अर्पण गर्नुपर्दछ । कुम्भ राशी-यस राशीका जातकले ऋणबाट मुक्ति पाउन सोमवारका दिन शिवलिंगमा गंगाजल अर्पण गर्नुपर्दछ । मीन राशी-ऋणबाट मुक्ति पाउन यस राशीका जातकले नित्य सूर्यदेवलाई जल अर्पण गर्नुपर्दछ ।
उर्जामन्त्री र मेरो भ्रामक समाचार बनाएः रवी…
सप्तकोशीको बहाव वर्षकै उच्च
आन्दोलनका लागी सरकारलेनै निम्तो दिएको छ :…
श्रीमान् गम्भीर नेपाली…बजाउने दुई युवा प्रहरी नियन्त्रणमा